Ciyaaraha iyo uurka, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Bezzia
Ciyaaraha iyo uurka, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Tony Torres | | Jimicsiga
Uur yeelashada lama micno ahaato jirro, illaa inta uurku si caadi ah u socdo. Xaaladaha badankood, nolol caadi ah waa la haysan karaa waana in la ilaaliyaa, iyadoo la sii wado fulinta howlo maalmeedka sida isboortiga. Firfircoonida lagu jiro muddadan waa lama huraan, Maaddaama cayaaruhu kaa caawin doono inaad ilaaliso miisaan caafimaad leh.
Dhinaca kale, jimicsi ku habboon ayaa kaa caawin doona inaad jidhkaaga u diyaariso dhalmada. Adigoon ilaawin inta jirku kaaga mahadcelin doono markay tahay waqtiga soo kabashada umusha kadib. Waxaan ula jeedaa ku habboon, saameyn yar iyo isboorti lagu taliyay inta lagu jiro uurka, waa wax ay takhasusleyaasha kugula taliyaan xaaladaha badankood.
Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa intaadan jimicsi sameynin inaad la tashato umulisadaada ama dhakhtarka xakameynaya uurkaaga. Waxaa jira kiisas gaar ah, uurka halista ah, ilmo iska soo ridid ​​hore oo lama filaan ah ama cuduro hore, kaas oo cayaaraha laga yaabo in laga hor yimaado. Si kastaba xaalku ha ahaadee iyo inta uu takhtarkaagu kula taliyo, kuwani waa kuwa ugu badan ee lagula taliyo isboortiga uurka.
1 Isboortiga iyo uurka, kuwa ugu badan ee lagula taliyay
1.1 Soco socodka
1.3 Yoga iyo Pilates, isboortiga ugu fiican ee uurka
Isboortiga iyo uurka, kuwa ugu badan ee lagula taliyay
Haddii aad la tashatay dhakhtarkaaga oo uu ku siiyay horay u socoshada, waxay u badan tahay in hadda aad shaki ka qabtid cayaaraha lagu dhaqmi karo xilliga uurka. Kuwani waa laylisyada ay takhasusleyaashu kugula talinayaan haweenka uurka leh, si ballaaran marka loo eego waxay yihiin isboorti ay ku jiraan qayb aerobic ah. Taas oo, kooxo muruqyo waaweyn ayaa la sameeyaa. Taasi waa, lugaha, garbaha, gacmaha, laabta iyo dhabarka iyo caloosha.
Marka laga hadlayo dumarka sida joogtada ah u jimicsiga isboortiga kahor uurka, waxaa lagu talinayaa in lagu sii wado isboortiga, iyadoo laga takhalusi doono kuwa loo arko inay yihiin kuwo saameyn sare leh. Taas bedelkeeda, haweenka uurka leh ee aan inta badan jimicsiga sameynin, waa inay ka fogaadaan laylisyada xunxun. Sidoo kale kuwa aan la aqoon oo aan loo diyaarin. Ma rabtaa inaad ogaato kuwa ugu badan ee lagula taliyo isboortiga uurka?
Isboortiga ugufiican dhammaan haweenka uurka leh, maadaama loo waafajin karo baahiyaha shaqsiyeed ee kiis kasta oo gaar ah. Laakiin markaad ka hadlayso socodka degdegga ah, waxaa muhiim ah in la fahmo inaysan ku saabsanayn socodka inta daaqadda laga adeeganayo. Si isboortiga loogu tixgeliyo sida oo kale, waa in la fuliyaa aag ku habboon, xawaare joogto ah iyo waqti go'an. Xaaladdan oo kale, ugu yaraan 30 daqiiqo maalin kasta.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilawdid socodka degdegga ah ee joogtada ah, ayaa aad si firfircoon ugu diyaargaroobi doontaa dhammaan isbeddelada soo socda. Isticmaal dhar iyo kabo habboon, ka raadi aag bannaanka oo doorbidaya dhul fidsan. Gaar ahaan markuu uurku sii socdo, maaddaama bartanka cuf isweydaarsiga uu lumo oo aad lumiso dheelitirkaaga.
Dabaasha waa mid ka mid ah cayaaraha ugu dhameystiran waxaana inta badan kugula taliya takhasusleyaasha dumarka inta ay uurka leeyihiin. Mid ka mid ah waxtarkeeda ugu weyni waa inay kuu oggolaato dhaqaaji jirkaaga oo dhan adigoon xoog ku qasbin kala-goysyada. Haddii aanad u baran dabaasha, waxaad eegi kartaa fasallada umulisada. Fasalladaan waxaa loogu talagalay haweenka uurka leh waxayna ku habboon yihiin inay sii socdaan mar haddii aad dhasho cunuggaaga.
Yoga iyo Pilates, isboortiga ugu fiican ee uurka
Ciyaarahaan saamaynta yar waxaa si weyn loogu taliyay inta lagu jiro uurka. Waxaad baran doontaa inaad si fiican u neefsato, taas oo kaa caawin doonta inaad xakameyso qaybtaan muhiimka ah ee foosha. Dhinaca kale, yoga, muuqaalada aad ku hagaajineyso dabacsanaanta jirkaaga, taas oo shaki la'aan kaaga faa'iidi doonta waqtiga umusha iyo soo kabashada ku xigta. Dabcan, yoga iyo Pilates labadaba waa in lagu sameeyaa kormeerka xirfadle.
Marka lagu daro hagaajinta jirkaaga jir ahaaneed, cayaaraha isboortiga oo si joogto ah u socda ayaa kaa ilaalin doona inaad yeelato miisaan badan inta aad uurka leedahay. Dhanka kale, waxay kaa caawin doontaa inaad dareentid fiicnaan iyo firfircoonaanxitaa marka uurku aad u horumarsan yahay. Xitaa waxaad awoodi doontaa inaad la kulanto haweenka kale ee uurka leh ee aad la wadaagi karto shakiga, cabsida ama shucuurta aadka u badan ee gobolkaan ka jirta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Ciyaaraha iyo uurka, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Inditex waxay soo bandhigtay Zara Beauty, oo ah nooca quruxda cusub ee Zara
Khiyaamada nadaafada guriga iyo guriga ee guriga